ပြဌာန်းလိုက်တဲ့ တပ်မတော် အက် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်တဲ့ ဥပဒေကြောင့် ဘယ်လို သက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်မလဲ ? | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်း ပြဌာန်းလိုက်တဲ့ တပ်မတော် အက် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်တဲ့ ဥပဒေကြောင့် ဘယ်လို သက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်မလဲ ?
❖ ဒါ့အပြင် တပ်မတော်သားတွေရဲ့ အရပ်သားတွေအပေါ် ပြစ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်မှုတွေကို တရားစီရင်ရာမှာဆိုရင်ရော ဘယ်လို အကျိုးဆက်တွေ ဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာ (တပ်မတော်အရာရှိ-ငြိမ်း) မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် စစ်ရေး လေ့လာသုံးသပ်သူ ဒေါက်တာအောင်မျိုးနဲ့ (တိုက်ရိုက်) ဆက်သွယ် မေးမြန်း တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
Previous articleရန်ကုန်မှာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး အဖြစ် ရွေးကောက်ခံမယ့် ကိုတင်ထူးအောင်
Next articleFacebook ပေါ် လူတစ်ဖက်သား ခံနိုင်တဲ့ စကားမျိုးတွေပဲ တင်ကြဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြား